Umbukeli: Enye indlela yasimahla yeAdobe Illustrator | Martech Zone
Vectr isimahla kwaye inomdla kakhulu umhleli wegraphic vector usetyenziso lwewebhu kunye nedesktop. IVectr inegophe lokufunda eliphantsi kakhulu elenza uyilo lwegraphic lufikeleleke nakubani na. IVectr izakuhlala isimahla ngonaphakade ngaphandle kwentambo.
Nguwuphi umahluko phakathi kweVector kunye neRaster Graphics?
Vector-esekwe imifanekiso yenziwe ngemigca kunye neendlela zokwenza umfanekiso. Banendawo yokuqala, indawo yokuphela, kunye nemigca phakathi. Banokudala izinto ezizalisiweyo. Uncedo lomfanekiso we vector kukuba unokuphinda uhlaziyeke kodwa ugcine intembeko yento yoqobo. Isiseko seRaster imifanekiso yenziwe ngee-pixels kulungelelwaniso oluthile. Xa usandisa umfanekiso we-raster kuyilo lwantlandlolo, iipikseli ziyagqwetha.
Cinga ngonxantathu xa kuthelekiswa nefoto. Unxantathu unokuba namanqaku ama-3, imigca phakathi, kwaye uzaliswe ngombala. Njengoko usandisa unxantathu ukuphinda kabini ubukhulu bayo, umane uhambisa la manqaku mathathu ngokwahlukileyo. Akukho kugqwetha konke konke. Ngoku nyusa ifoto yomntu iphindwe kabini kubukhulu bayo. Uya kuqaphela ukuba ifoto iya kufiphala kwaye igqwetheke njengoko umbala wombala usandiswa ukogquma ngaphezulu iipikseli.
Kungenxa yoko le nto imizobo kunye neelogo ezifuna ukuphinda zenziwe ubungakanani kwakhona zihlala zisekwe kwivektara. Kungenxa yoko le nto sihlala sifuna imifanekiso emikhulu esekwe kuraster xa usebenza kwiwebhu… ukuze zincitshiswe kuphela ngobungakanani apho kukho ukugqwetha okuncinci.
IVectr iyafumaneka kwi-Intanethi okanye unokukhuphela usetyenziso lwe-OSX, Windows, Chromebook, okanye iLinux. Baneseti etyebileyo ye amanqaku kwimephu yendlela yabo enokuthi iyenze ibe yenye indlela enokusebenziseka ngokufanelekileyo kwiAdobe Illustrator, kubandakanya neenguqulelo ezihlanganisiweyo ezinokudityaniswa kubahleli be-Intanethi.
Zama iVectr ngoku!
tags: imephu encincirasterraster xa kuthelekiswa vectorvectorumhleli wegraphic vectorvector kuthelekiswa rasterumhleli wemizobo esekwe kwivenkileugqirha